ဟိုတယ် Jacuzzi သဘာဝ - ဟိုတယ် BubbleBad
ဟိုတယ် Jacuzzi သဘာဝ
ဟိုတယ်များသည်၎င်းတို့၏အလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာထိုင်ခင်းများနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်စားသောက်ဖွယ်ရာများအတွက်ချီးကျူးကြသည်, maar hoe zit het met de extra voorzieningen die uw vakantie van goed naar uitstekend kunnen maken. Hotelbubbelbaden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onvergetelijk maken van uw ervaring. Vergeet de groezelige bubbelbaden naast het hotelzwembad en bereid u voor op enkele van de beste bubbelbaden ter wereld. Van bubbelbaden buiten met uitzicht op bergen, valleien en dieren in het wild tot bubbelbaden die rechtstreeks in uw kamer zijn ingebouwd; deze 15 ဟိုတယ်ရေပူကန်များကသင်၏အားလပ်ရက်ကိုယနေ့ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ချင်သည်!
15. Amangiri, Canyon Point, ထုတ်
ဤအဆင့်မြင့်အပန်းဖြေစခန်းတည်ရှိသည် 600 Canyon Point ရှိဧကနှင့်ရှုခင်းအလယ်၌တည်ဆောက်ထားသည်. ၎င်းသည် Grand Staircase-Escalante အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံအပေါ်မြင်ကွင်းများကိုပေးသည်, သဲကန္တာရကိုနှစ်သက်သောခရီးသွားများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်. ကြီးမားသောရေကူးကန်နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လှေကားထစ်နှင့်အတူ, ကျောက်နံရံရဲ့ခြေရင်းမှာလှပတဲ့ရေပူကန်ရှိပါသလား.
King-size sunbeds များနှင့် loungers များသည်သင်ရေထဲတွင်မရှိလျှင်အပန်းဖြေရန်အဆုံးစွန်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဆောင်းရာသီသို့နွေရာသီသို့သွားလည်ရန်ရွေးချယ်သည်, ရေပူကန်သည်လေဟာပြင်သို့ငေးကြည့်ပြီးညဘက်တွင်ကြယ်များကိုကြည့်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. ဧည့်သည်များသည်အနီးအနားရှိ Lake Powell တွင်ဤနေရာတွင်ရေလှုပ်ရှားမှုများကိုနှစ်သက်နိုင်သည်, အမျိုးသားဥယျာဉ်များကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနှင့် spa ကုသမှုများတွေ့ကြုံခံစားပါ.
14. Park Hyatt Beaver Creek Resort & ရေပူစမ်း, Beaver ချောင်း, CO
ဤဇိမ်ခံအပန်းဖြေအပန်းဖြေစခန်းသည်ရေပူကန်တစ်ခုတည်းကိုသာမပေးနိုင်ပါ, ငါးယောက်သာ, တစ်ခုချင်းစီမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရောင်းအားနဲ့, ရေချိုးပြီးရေစိမ်ချင်ရင်ဒီနေရာကိုလည်ပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါ. သင်ဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအချို့ကိုရှာဖွေနေတယ်, ထို့နောက်လူကြီးနှစ် ဦး ၏ရေပူကန်များထဲမှတစ်ခုကိုသေချာသွားပါ. မင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုရှာနေတာလား, Vail ချိုင့်ဝှမ်းကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင်ကွင်းဖြင့်တစ်ချက်ကြည့်ပါ.
ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာငါတို့အကြိုက်ဆုံးရေပူကန်ကရေတံခွန်ပူတဲ့ရေကန်ဘဲ, recht uit de natuurlijke rotsformatie die het bad omringt. Als u op zoek bent naar service op een helling, ga dan naar het bad dat compleet wordt geleverd met cocktails, een persoonlijke serveerster, zachte badjassen, warme handdoeken en truffelpopcorn. Als je meer zin hebt om te zwemmen en minder om te ontspannen, kijk dan eens naar het verwarmde buitenzwembad dat het hele jaar door geopend is.
အားလုံးပါဝင်နိုင်သော Vermont အပန်းဖြေစခန်းသည်ကျေးလက်အိမ်များထက်ဇိမ်ခံအိမ်များနှင့်တူသောသီးခြားအိမ် ၁၀ ခန်းရှိသည်။. ဤအိမ် ၁၀ လုံးတွင်အများစုမှာမယုံနိုင်စရာရေပူကန်များရှိသည်. Deze zijn zowel binnen als buiten gelegen. Gasten kunnen hun accommodatie kiezen bij het boeken en of u nu op zoek bent naar een verzonken overdekte hottub naast een open haard of een buitenbad in een afgeschermde privé veranda, u heeft altijd geluk.
Elke hut is ontworpen door professionelen en het is geen verrassing dat gasten hier jaar na jaar terugkomen. Onze favoriete hottub is die in het Aviary-huisje. ဒီမှာဧည့်သည်တွေ, hebben de mogelijkheid om te genieten in een bad dat is verzonken in een granietrots, met uitzicht op het bos van New England vanuit een enorm raam. မြင့်မားသောကျောက်တုံးမီးဖိုသည်ခြေလှမ်းများဝေးပြီးသင်ဤနေရာတွင်မည်သည့်အခါမျှအေးမည်ကိုသေချာနိုင်သည်.
12. Regent လက်ဖဝါး, Turks- en Caicoseilanden
Het resort zelf beschikt over 72 suites en ligt op slechts een steenworp afstand van witte zandstranden en turquoise wateren. Andere voorzieningen zijn een spa van 25.000 စတုရန်းမီတာ, verlichte tennisbanen en een overvloed aan watersporten zoals zeilen, kajakken en snorkelen. Het is echter gemakkelijk om de hele vakantie hier aan het zwembad door te brengen want of je nu ontspant in de hottub of je stort je in het warme zwembad, het is absoluut adembenemend.
Wakatipu ရေကန်၏အစွန်းတွင် alpine cedar တစ်ပင်ထိုင်သည်- မယုံနိုင်လောက်အောင်လှပသောအခန်းများပါ ၀ င်သော Stone Lodge, အခန်းများနှင့်တည်းခိုခန်းများ. Hier vinden de gasten een ongelooflijke hottub met uitzicht op de bergen van The Remarkables. De hottub is omgeven door glazen deuren van vloer tot plafond die opengaan om zich bloot te kunnen stellen aan alle elementen en dit met brandende kaarsen eromheen; ဒါကပြီးပြည့်စုံတဲ့အချစ် ဦး တည်ရာပါ.
Buiten de spa bevindt zich een extra hottub, sauna နှင့်အပူပေးရေကူးကန်. Als u met een familie of een groep vrienden reist, boek dan het huisje van de eigenaar, waar u toegang heeft tot uw eigen privé-bubbelbad op het balkon met uitzicht op de prachtige omgeving.
Het is geen verrassing dat deze hottub op deze lijst staat, omdat hij eigenlijk is ontworpen door de met een Oscar bekroonde productieontwerper Dean Tavouaris. De lodge heeft eigenlijk een waterkrachtcentrale die het bad van 41.640 liter verwarmt met de overtollige elektriciteit die het produceert en in tegenstelling tot een typisch bubbelbad met veel bubbels, ဒါကရေနွေးလား. အပူပိုင်းတောအုပ်တစ်ခုတွင်တည်ရှိသည်, လက်တွေ့ဘဝမှလွတ်မြောက်ခြင်းကဲ့သို့ဤစည်ပိုင်း၌ရေချိုးနေသည်, ခဏလေးသာဆိုရင်တောင်.
Wat deze hottub zo uniek maakt, is het feit dat hij werd gebouwd door lokale steenambachtslieden met duizenden stukken lokaal graniet. ဧည့်သည်များဤနေရာတွင်ဘားတွင်တည်ခင်းထားသောအချိုရည်များကိုခံစားနိုင်သည်; အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရန်သင်သွားနေကြောင်း Bartender အားအသိပေးပါ.
9. Het Ski Dream Home, ပန်းခြံမြို့တော်, Utah
Dit weelderige ski-in, ski-out huis ligt 8000 voet boven de zeespiegel bovenop Little Baldy Peak in Deer Valley Resort en heeft een ongelooflijke stenen hottub voor 12 လူပုဂ္ဂိုလ်များ. Gasten hoeven zich hier geen zorgen te maken dat ze het koud hebben bij ijzig weer met de buitenhaarden, verwarmde omliggende dekken en een verwarmd buitenzwembad. Vanuit de hottub kunnen gasten zien hoe de zon het Wasatch-gebergte in schitterende paarstinten verandert, terwijl ze genieten van een cocktail uit een van de twee bars in het huis.
Dit is een van de meest romantische bubbelbaden op de lijst, gelegen in het ultra-luxe Conrad Maldives Rangali Island hotel. ရေပူကန်သည်ရေပေါ်တွင်လှပသော spa အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးလူနှစ် ဦး သာရှိသည်, သို့မှသာဧည့်သည်များအနေဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးလုံခြုံမှုကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်. ကြည်လင်သောအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ရှုသည်, တက်ကြွသောသန္တာကျောက်တန်းများဖြင့်ဝန်းရံထားပြီးအပူပေးလိုက်သည် 104 ဒီဂရီ; ဧည့်သည်တွေကဒီရေပူကန်ကနေထွက်သွားချင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး.
မင်းမြန်မြန်ထွက်သွားဖို့စိတ်မပူပါနဲ့, want het hotelpersoneel zal u voorzien van verse vruchtensappen en koele aromatische handdoeken terwijl u aan het ontspannen bent. Andere geweldige voorzieningen van dit resort zijn een onderwaterrestaurant, een ondergrondse wijnkelder met meer dan 20.000 flessen wijn, holistische behandelingen in de prachtige spa en unieke ervaringen zoals zwemmen met walvishaaien.
ဤကျေးလက်အပန်းဖြေစခန်းသည်လှပသော Orcas ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဤနေရာတွင်သဘာဝနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန်အာရုံစိုက်သည်. Drie hottubs in de buitenlucht waar kleding optioneel is, အပန်းဖြေစခန်း၏ဗဟိုတွင်ရှိသည်, Salish ပင်လယ်နှင့် San Juan ကျွန်းစု၏အခြားကျွန်းများကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ပါ. ရေကန်များသည်လူရှစ် ဦး အထိဆံ့ပြီးဟိုတယ်ဧည့်သည်များနှင့်ဧည့်သည်များအားအခကြေးငွေဖြင့်သုံးနိုင်သည်.
ဤအပန်းဖြေစခန်းမှဧည့်သည်များသည်စခန်းချနေရာများမှရွေးချယ်နိုင်သည်, တဲများသို့မဟုတ် yurts များကိုတည်းခိုရန်နှင့်ကျွန်းပေါ်တွင်တွေ့ကြုံခံစားရန်လုပ်ဆောင်စရာများစွာရှိသည်. ယောဂ (သို့) နှိပ်နယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပြီးလန်းဆန်းစေသည်, တစ်နှစ်ပတ်လုံး၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအပူချိန်တွင်သိုလှောင်ထားသောရေချိုးကန်များနှင့်ရေချိုးကန်များမသွားခင် 104 ဒီဂရီနေဖို့.
6. Nimmo Bay အပန်းဖြေစခန်း, ဗြိတိသျှတို့ဖြစ်သည်, ကနေဒါ
Gasten van het Nimmo Bay Resort in British Columbia kunnen genieten in een van de twee uit rood cederhout vervaardigde hottubs die het hele jaar door verwarmd worden tot een heerlijke 104 ဒီဂရီ. De omgeving zelf is absoluut adembenemend en het uitzicht vanuit een van de achtpersoonsbubbelbaden is al even indrukwekkend; watervallen, weelderige groene vegetatie en het gevoel verscholen te zijn te in het midden van nergens.
5. Het hotel op Rivington, နယူးယောက်မြို့
ဤ Lower East Side ဟိုတယ်သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းများကိုရှာဖွေနေသူတိုင်းအတွက်လျှို့ဝှက်ပူအိုက်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောပါတီတစ်ခုနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိရေပူကန်အတွေ့အကြုံ. အာရဇ်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဤလိုချင်သောရေပူကန် 10 အပြင်ထွက်ထိုင်ခြင်းသည်မြင်ကွင်းကိုခံစားရင်းကော့တေးလ်အနည်းငယ်ကိုခံစားရန်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်သည်. De ronde cederhouten hottub lijkt meer op een emmer en levert ​​een meerwaarde aan dit ultra-hippe penthouse.
ဤချောမောလှပသောရေပူကန်ပတ်လည်၌မယုံနိုင်စရာအပိုပစ္စည်းများရှိသည်, နွေရာသီတွင်အအေးခံရန်အပြင်ပန်းကဲ့သို့, ဆောင်းရာသီ၌သင်၏ခြေထောက်များကိုနွေးထွေးစေရန်နှင့်မယုံနိုင်စရာကောင်းသောပါတီပွဲညများပြုလုပ်ရန်အပြင်ဘက်မီးဖို. ဤဟိုတယ်၌ဇိမ်ကျပြီးသေသပ်လှပသောအခန်းများနှင့်ဧည့်ခန်း၌ကြီးမားသောရေကန်စားပွဲရှိသည်. နာမည်ကြီးတွေတော်တော်များများဒီမှာပါတီပွဲရှိတယ်.
4. Banyan Tree Lijiang Resort & ရေပူစမ်း, Lijiang, တရုတ်
ဤမယုံနိုင်စရာအပန်းဖြေစခန်းမှဧည့်သည်များသည်အခြားမည်သူ့ကိုမျှရေပူကန်မျှဝေရန်မလိုပါ, garden villa တစ်ခုစီတွင်လူနှစ်ယောက်အတွက်သီးသန့်ရေပူကန်ရှိသည်. ရေပူကန်များသည်ကျော်ကြားသော Jade Dragon Snow Mountain ကိုလျစ်လျူရှုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေသည် 100,4 ဒီဂရီ. Met avondmalen van wereldklasse, een ongelooflijke spa en luxe accommodaties biedt dit resort voor elk wat wils.
ဤငါးစုံတည်းခိုခန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအထင်ရှားဆုံးဟိုတယ်ရေပူကန်များထဲမှတစ်ခုပါ ၀ င်သည်. ဤရေကန်သည်လူ ၆ ဦး အထိဆံ့နိုင်ပြီးဧည့်သည်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်. ဟိုစည်ပိုင်းမှဧည့်သည်များသည်ဆင်များကိုကြည့်နိုင်သည်, မြင်းကျား, တောခွေးများနှင့်ခြင်္သေ့များသည်အနီးအနား၌ကျက်စားသည်. Molori Safari Lodge သည် Madikwe Game Reserve တွင်နက်ရှိုင်းစွာတည်ရှိသည်, တစ်ခုရှိတယ် 185.329 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောဧကအကျယ်အ ၀ န်း, ၎င်းသည်ငှက်ဖျားရောဂါကင်းစင်သည်!
Gasten kunnen niet alleen genieten van deze epische hottub, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုရေချိုးနေစဉ်ရိုးရာအချိုရည်များနှင့်အဆာပြေကျွေးသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုအိမ်မှုးအဖြစ်ဆက်ဆံသည်. ဆုကြေးတစ်ခုအနေနှင့်ဤလှပသောရေပူကန်အားအညီအမျှအံ့မခန်း infinity ရေကန်ဖြင့်ဝန်းရံထားသည်, လှပသောသစ်သားပရိဘောဂများနှင့်အဆင်ပြေသောထိုင်ခုံများနှင့်ဆိုဖာများ.
2. ဟိုတယ် Villa Honegg, Luzern, ဆွစ်ဇာလန်
ဤအပြင်ဘက်ရေပူကန်သည်ဤစာရင်းတွင်အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရေပူကန်ထက်ရေနွေးငွေ့ကန်နှင့်ပိုတူသည်. ဒီအိမ်ရဲ့နောက်ဘက်မြက်ခင်းပြင်မှာ 1905 ဤမယုံနိုင်စရာရေပူကန်တည်ရှိပါသလား။, သန့်ရှင်းသော Lake Lucerne ကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ပါ. ဆောင်းရာသီတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းတွင်နှင်းဖုံးလွှမ်းထားသောတောင်များပါ ၀ င်သည်, နွေရာသီစိမ်းလန်းနေချိန်, မြက်ခင်းပြင်များကိုတောင်မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သလောက်မြင်နိုင်သည်.
ဤအလွန်ခေတ်မီရေချိုးခန်းသည်သေသပ်လှပသောဒီဇိုင်းရှိသည်, သံမဏိလက်ရန်းများနှင့်ချွန်ထက်သောထောင့်များဖြင့်, ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျောက်တုံးကြီးနှင့်တောက်ပစွာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်. ဤလှပသောဟိုတယ်၌အခြားသာယာ ၀ ံ့ဆောင်မှုများနှင့်အတူရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုပါ ၀ င်သည် 20 ထိုင်ခုံများ, e-bike ငှားရမ်းခြင်း, အလှပြင်ဆိုင်, မီးဖိုနှင့်အတူအခန်းတစ်ခန်း, အနီးရှိဂေါက်ကွင်းနှင့်အလွန်ကောင်းသောစားသောက်ဆိုင်.
1. Fairmont Banff Springs, Banff, ကနေဒါ
Fairmont Banff Springs Hotel သည်ဟိုတယ်တစ်ခုထက်ဒဏ္aleာရီရဲတိုက်တစ်ခုနှင့်ပိုတူနေသည်ကိုသိသောကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုပေးသည်, လှပသောအပြင်အဆင်နှင့်မော်ကွန်းပူကန်တစ်ခု. စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းသည်အပြာရောင်မိုးကောင်းကင်ဖြစ်သည်, မြင့်မားသောတောင်များ, ကြီးမားသောထင်းရှူးပင်များနှင့်နှင်းဖုံးလွှမ်းနေသောတောင်များ. အရာအားလုံး၏အလယ်တွင်နှစ်မြှုပ်ရန်ဆန္ဒပြုသောပြင်ပရေပူကန်တစ်ခုရှိသည်. သင်နွေရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီ၌ဤကိုသွားရန်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ, ဧည့်သည်များသည် alpine လေကိုရှူရင်းအနာကျက်ရေ၌စိမ်ပျော်နေလိမ့်မည်.
ထပ်တူစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော Willow Stream Spa သည်လည်းဤလှပသောအိမ်ရာပေါ်တွင်တည်ရှိသည်, ၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်ရှိသည်- နှင့်အပြင်ဘက်ရေပူကန်များရှိသည်, ကုသမှုနှင့်ဓာတ်သတ္တုရေချိုးခန်းများအတွက်အခန်းများစွာလည်းရှိသည်. မင်းရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာဒီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းတွေကိုရှုစားရင်းနွေးထွေးတဲ့ရေထဲမှာစိမ်တာထက်ပိုမှော်ဆန်တဲ့အရာမရှိနိုင်ဘူး။.
အခန်းတွင်း Jacuzzi ပါသောဟိုတယ်
HotelBubbelBad.nl တွင်သင်၏ jacuzzi ဟိုတယ်အခန်းကိုလျင်မြန်စွာစျေးသက်သက်သာသာမှာယူပါ